Loharano pejy fitsikerana 12 | Martech Zone
Loharano pejy fitsikerana 12
Alahady 29 Janoary 2012 Talata, May 3, 2016 Douglas Karr
Hubspot no tena mpitarika mitarika atiny hitondrana paikady marketing miditra, tsy mbola nahita orinasa iray namono whitepapers, demos ary ebooks be dia be aho. Hubspot izao manatitra an infographic amin'ny singa 12 fitsikerana pejy fandraisana.
Ny pejy fandraisana dia mila mitafy satroka maro ary manolotra mpihaino marobe izay avy amin'ny toerana maro samihafa. Tsy toy ny pejy fananganana natokana izy io, izay tokony hanomezana hafatra miavaka ny fifamoivoizana avy amin'ny fantsona manokana handraisana andraikitra manokana. Ny pejy fitobiana dia manana taham-panovana avo kokoa satria lasibatra izy ireo ary mifandraika indrindra amin'ny mpitsidika.
Manampy ny mpanjifanay izahay amin'ny fananganana paikady marketing miditra… ary mila milaza aho fa mieritreritra aho Hubspot tsy nahatratra ny marika amin'ity infographic ity… misy singa sy paikady tena lehibe tsy tratran'ity infographic ity:
Antsipiriany ifandraisana - Ny antso-to-hetsika dia sombim-pahalalana tena ilaina, saingy tsy ny rehetra no maniry ny tsindrio mankany amin'ny demo na loharano fanampiny. Indraindray ny mpanjifanao dia vonona ny hividy ary mila tsotra fotsiny a nomeraon-telefaona or endrika fisoratana anarana hanomboka.
ara-tsosialy Sary Masina - tsy azo hamaivanina ny lanjan'ny media sosialy amin'ny fitaizana mpanjifa. Indraindray hipetraka amin'ny tranokalanao ny olona, ​​saingy mbola tsy vonona ny hividy izy ireo… ka hanaraka anao amin'ny Facebook, Google+ na Twitter izy ireo hahafantarana anao bebe kokoa.
Famandrihana Newsletter - angamba ny singa ambanin-javatra indrindra amin'ny pejy fandraisam-bahiny dia ny fisoratana anarana amin'ny mailaka. Manome fomba iray hidiran'ny fanantenana amin'ny adiresy mailaka ary averimberina nanohina miaraka amin'ny vaovao, tolotra ary fampahalalana avy amin'ny marikao dia tsy voavidim-bola. Ny fakana adiresy mailaka dia sarobidy - alao antoka fa tsotra sy miharihary ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny.
Miady hevitra aho amin'ny fampiasana ilay teny Toetoetra amin'ny # 5 ihany koa. Voaporofo hatrany hatrany fa be mpampiasa kokoa nahasarika tombony fa tsy fiasa. Tsy zava-dehibe ny miresaka momba ny fitateranao vaovao miovaova… fa ny fampisehoana ny angona azo aroso izay asehonao mba hahazoan'ny orinasa vola dia!
Farany, ny pejy fandraisana dia tsy maintsy hamboarina ho an'ny teny lakile izay hanondro tsara ny tranokalanao ary hiantoka ny fahitana ny tranokalanao rehefa mitombo laza izany. SEO dia tokony hanana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana tranokala sy ny fampandrosoana anao.
Tags: singa ho an'ny pejy fandraisanafamoronana pejy fandraisanasinga ao amin'ny pejy fandraisanaahoana nohubspot
Tsy miaro ny laza nataonao ny kabary maimaim-poana
Izahay dia bilaogin'ny media sosialy 10 ambony!
Jan 30, 2012 ao amin'ny 4: 54 AM
Marina loatra! ary roa andro monja dia nahazo fanavaozana avy amin'ny Google momba ny maha-zava-dehibe ny pejy fipetrahana. Ka raha misy olona manao fampielezan-kevitra optimization ivelan'ny pejy dia zava-dehibe ny fananana lisitry ny teny fanalahidy marina sy pejy mety hitondrana antsika ireo teny fanalahidy ireo.
Janoary 31, 2012 amin'ny 12:56 PM
Misaotra nizara ny fahaizanao. Mankasitraka ny hevitrao momba ny singa famandrihana gazety aho! Mahagaga ahy ny fomba tsy maintsy hitrandrahako mba hahitana famandrihana amin'ny orinasa tiako henoina.
Janoary 31, 2012 amin'ny 5:18 PM
Ekeko fa ny iray amin'ireo singa lehibe indrindra tsy hita amin'ity pejy ity dia ny kisary sosialy. Mino aho fa tokony hisy andiana kisary media sosialy roa isaky ny pejy—ny iray ho an'ny orinasa, vokatra na tranokala ankapobeny ary iray hafa ho an'ny pejy manokana na lahatsoratra tsidihin'ny mpampiasa.